Oge mmeputa 'Creepshow' amalitela nke oma!
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Creepshow' Oge 2 Production amalitela na Ọchịchị!
'Creepshow' Oge 2 Production amalitela na Ọchịchị!
by Waylon Jọdan September 10, 2020
by Waylon Jọdan September 10, 2020 819 echiche
Emechara amalitepụta imepụta ihe na oge abụọ Creepshow, Usoro akụkọ ihe mere nke Shudder dabere na fim site na 1980s. E yigharịrị Production tupu afọ a mgbe etinyela ọtụtụ n'ime mba ahụ maka nchegbu na Covid-19.
Emere oge isii a ga-amalite na 2021.
“Enwetụbeghị m obi ụtọ karịa n’azụ igwefoto dị ka m dị taa,” ka onye ngosi ihe nkiri Greg Nicotero kwuru na nkwupụta. “Mgbe efu anyị gbaa oge na March site nanị ihe karịrị 48 awa, oge 2 nke Creepshow Na-akụda ala na-agba ọsọ ka ese foto na-amalite ịtụgharị. Ndị otu na ndị ọrụ nwere ọkwa ọ crewụ na ịnụ ọkụ n'obi nke m hụtụbeghị mbụ na ọ na-akpali akpali. Ọtụtụ n'ime anyị na ụlọ ọrụ ndị na-eme ihe nkiri na-eche ụbọchị anyị nwere ike ịmalite ime ihe kachasị mma anyị nwere - iji nwee ọ funụ ọnụ na-eke ụwa ọhụrụ, ọhụụ ọhụụ na ihe ọhụụ ọhụrụ.
Oge nke mbụ bụ nnukwu anụ mmiri dakwasịrị anyị, na-eme ka ndị na-elele anya n'akụkụ osisi ahụ wee bụrụ usoro nyocha ọhụụ kachasị mma nke 2019, "ka General Manager Shudder, Craig Engler kwukwara. "N'ime oge nke abụọ, Greg Nicotero na ndị otu ya ejirila akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ karịa ma sie ike karịa, atụmatụ ọhụrụ e kere eke dị ịtụnanya, na ntụgharị gbagọrọ agbagọ nke na-egosi n'ezie ihe ngosi ihe nkiri ahụ, 'Ihe Kachasị Egwu Fun Ga-atụ Egwu.'"
Usoro a dabere na ihe nkiri 1982 nke George A. Romero dere.
Na mgbakwunye na nkwupụta mmepụta ahụ, anyị natara ozi na ngalaba anọ nke a ga-egosipụta n'oge nke abụọ Creepshow.
Nke mbụ bụ “Shapeshifters Amaghị aha” Akụkụ Otu na abụọ na-agụ Anna Camp (ezi Blood) na Adam Pally (Ihe oru ngo a). Ọ bụ Nicotero dere ngalaba ndị ahụ, sitere na akụkọ sitere n'aka JA Konrath (Ikpeazụ oku) banyere nwoke a bụrụ ọnụ na-achọ otu ìgwè anụ ọhịa wolf.
Ọzọ, Keith David (The ihe), Ashley Laurence ()Hellraiser), na Josh McDermitt (Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije) ga - apụta na nke Frank Dietz dere nke akpọrọ "Pesticide" banyere onye mkpochapụ nke na - eme "ahịa infernal."
N'ikpeazụ, John Esposito dere "Model Kid" ma gbasara nwata nwoke tụgharịrị na ngwugwu ihe owuwu iji gbanahụ ndụ enweghị obi ụtọ ya.
Oge izizi kụrisịrị ihe ndekọ gafee osisi maka Shudder, anyị ga-ege ntị maka oge abụọ Creepshow mgbe ọ ga-abịa n'afọ ọzọ!
Nwere obi ụtọ maka oge abụọ? Ka anyị mara ihe ị na-eche na-aza ajụjụ!